Dib udhac markale ku yimid doorashooyinka dowladda Federaalka.
Saturday September 04, 2021 - 17:38:26 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Markale dowladda Federaalka Soomaliya ayaa soo saartay jadwal cusub oo ku saabsan doorashooyinka laqaban doono.
Guddiga doorashooyinka dadban ayaa sheegay in bishan gudaheeda lasoo xuli doono ergooyinka dooranaya xildhibaannada aqalka hoose, guddiga ayaa faraya in 5-ta illaa 18ka september ladhameystiro doorashooyinka aqalka hoose.
sida ku cad jadwalka cusub diyaarinta iyo diiwaan-gelinta Ergooyinka iyo Musharaxiinta Xildhibaanada Golaha Shacabka ay bilaabaneyso 25-ka Sep, doorashada xildhibaannada ayaa dhici doonta bilaawga bisha Octobar halka Novembar dhaxdeeda laqeybin doono kaararka xildhibaanada.
Jadwalkan cusub laguma sheegin waqtiga laqaban doono doorashada madaxweynaha dowladda Federaalka oo ah midda ugu xasaasisan, waa markii 4aad oo dib udhac ku yimaad jadwalka doorashadan murunka badan ka dhax dhalisay siyaasiyiinta dabadhilifyada ah.
Maamulka 'Jubbaland' oo sheegay in uu dhammeystiray doorashooyinka Aqalka sare.
Cabdi Xaashi oo markale loo doortay in uu noqdo xildhibaan katirsan aqalka sare.